"Mascotte" nationaly ho an' ny fiarovana an'habaka - Arozaza
Ho fanatanterahana ny fandaharan’asa SAHY, eo amin’ny sehatra fiarovana an’habaka, ny ONG Youth First dia namolavola “mascotte” maneho ny endriky ny ady atao amin’ireo karazana herisetra an’habaka sy ny fampiroboroboana ny Aterineto tsara kokoa ho an’ny rehetra. Ho an’ireo ankizy sy ny tanora mpampiasa Aterineto, izay maro an’isa eto Madagasikara, no namoronana ity “mascotte ity”. Nanampy tamin’ny famolavolana ny “mascotte” ny komity “fiarovana ny ankizy amin’ny herisetra sy fanararaotana an’habaka” tarihin’ny Ministeran’ny mponina, fiarovana ara-tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy. Ny “mascotte” dia ho ampiasaina amin’ny hetsika rehetra mifandraika amin’ny ady atao amin’ny herisetra an’habaka atao amin’ny ankizy sy ny tanora sy ireo hetsika ho fampiroboroboana ny Aterineto tsara kokoa ho an’ny rehetra.
Manasa anao ihany koa izahay hampiasa azy io. Inty ny rohy mifandraika amin'izany: https: //arozaza.mg/wp-content/uploads/2020/09/Guidelines-Mascotte-ONG-Youth-First_Compressed.pdf